Ogaden News Agency (ONA) – Faalo: Kacdoonka Soomaalida Ogadenya & Mustaqbalka Dambe.
Faalo: Kacdoonka Soomaalida Ogadenya & Mustaqbalka Dambe.
Posted by ONA Admin	/ May 12, 2018
Wadanka Ogadenya waxaa ma socda kacdoon shacab oo maalinba maalinta ka dambaysa sii xoogaysanaya. Kacdoonka Ogadenya ka bilowday ayaa laga dheehan karaa in shacabku gaadhay meel aan kasoo noqosho lahayn kadib markii ay soo kartay cadaadiska iyo cabudhinta aan kala joogsiga lahayn ee shacabka lagu hayo.
Gobollada Shiniile, Faafan, Shabeele iyo Qoraxay ayaa kamid ah meelaha uu kacdoonku ka socdo. Waxaa kale oo jira deegaamo badan oo dalka Ogadenya kamid ah oo kacdoon shacab uu hadheeyay. Ogadenya ayaa ku jirta gumaysi kii abid ugu xumaa ee taariikhda banii’aadamka soo mara.
Hadaba hadaan yaraha milicsano kacdoonkii gu’ga Carbeed waxaa bilowgiisii sabab u noqday wiil dhalinyaro ah oo 26 jir ah oo reer Tuunisiya ah kadib markay Askartii talisku nolosha u khadhaadheeyeen ee uu qaatay go’aan ah inuu nolosha adduunyo macasalaameeyo ee uu is gubay, waxaana xigtay in Boqoradii Carbeed ee suuliyada dahabka ka samaysan gali jiray qaarkood Kaba la’aan waddanka kaga baxaan sida Zaynal Caabidiin Cali, qaarkood xabsiga la dhigo sida Xusni Mubaarak, qaarkoodna la toogto sida Qaddaafi.
Dhinaca kale habeen hore oo ay taariikhdu ahayd 11 May 2018, waxay Kooxda kabo-qaadka ah ee Cabdi iley fiidnimadii Suuqa magaalada Qabridahare ee caasimada Gobolka Qoraxay ka qabteen alle u naxariistee gabadh lagu magacaabo Tayasiir Cumar Food oo ah 25 jir ah, kadibna isla habeen hore ayey dabeen (marjiyeen) oo si fool xun oo banii’aadminimada iyo xeerarka caalamiga ah ka baxsan u dileen.
Dhacdadan foosha xun ayaan ahayn midii ugu horaysan ee nooceeda ah ee Ogaden ka dhacda balse waa mid joogta ah oo shacabka Soomaalida Ogadenya lagula dhaqmo hadh iyo habeenba balse tani waxay ku soo beegantay xilli uu shacku go’aansaday Gumaysiga Itoobiya iyo cawaantiisa yur la iska yidhaahdo.
Waxa uu falxan foosha xun leh dhaliyay cadho iyo dareen aad u balaadhan oo saameeyay dhamaan shacabka Soomaalida Ogadenya oo idil dal iyo dibadba. Waxaa aad looga murugooday sida shacabka masaakiinta ah loola dhaqmayo iyo sida aysan ujirin cid kula xisaabtamaysa Gumaysiga xasuuqa iyo gumaadka joogtada ah ee Ogadenya uu kawado. Su’aasha iswaydiinta mudan ayaa ah Muxuu ku dambayn doonaa kacdoonka Ogadenya ka bilowday?